China Natural Muscovite mica ntụ ntụ ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Huajing
Huajing ịchọ mma ọkwa muscovite mica ịmụta Chinese ịnweta ngwaọrụ, ndị mineral si Lingshou County, Hebei n'ógbè, China. Ngwuputa a nwere ikike nke igwuputa ihe. The ihe enweghị asbestos, arọ metal izute chọrọ nke ịchọ mma.
WM-60 ọcha ọla ọcha 82 ～ 85 150 ～ 170 7 ～ 8 .1 .1 .10 .3 ＜ 0,5 60 0.22 mgbukepụ anya onyinyo
WM-100 ọcha ọla ọcha 82 ～ 85 90 ～ 100 7 ～ 8 .1 .1 .10 .3 ＜ 0,5 60 0.22
WM-200 ọcha ọla ọcha 84 ～ 89 30 ～ 40 7 ～ 8 .1 .1 .10 .3 ＜ 0,5 70 0.20
WM-325 ọcha ọla ọcha 84 ～ 89 18 ～ 23 7 ～ 8 .1 .1 .10 .3 ＜ 0,5 80 0.16 elu luster ntọala, anya onyinyo, BB ude, CC ude, blusher
WM-600 ọcha ọla ọcha 84 ～ 89 9 ～ 12 7 ～ 8 .1 .1 .10 .3 ＜ 0,5 90 0.14
WM-1250 ọcha ọla ọcha 83 ～ 88 6 ～ 9 7 ～ 8 .1 .1 .10 .3 ＜ 0,5 70 0.12
44.5 ~ 46.5% 32 ~ 34% 8.5 ~ 9.8% 0.6 ~ 0.7% 0,53 ~ 0,81% 0.4 ~ 0.6% 0.8 ~ 0.9% 3.8 ~ 4.5%
Refractoriness agba Mohs ekweghị ekwe na-agbanwe ọnụọgụ nghọta Ebe mgbaze ike na-akpaghasị ịdị ọcha quotient
650 ℃ Ọcha ọcha 2,5 1475.9 ~ 2092.7 × × 106Pa 71.7 ~ 87.5% 1250 ℃ 146.5KV / mm > 99.5%
Huajing ịchọ mma ọkwa muscovite mica ịmụta Chinese ịnweta ngwaọrụ, ndị mineral si Lingshou County, Hebei n'ógbè, China. Ngwuputa a nwere ikike nke igwuputa ihe. Ihe ndị a enweghị asbestos, ọla dị arọ na-ezute ihe achọrọ nke ihe ịchọ mma .Mgbe ịdị ọcha, ịsa, egweri, nhazi nke hydraulic, akwa nsị dị elu, n'ikpeazụ ngwaahịa ndị ahụ nwere uru nke dị nro, dị mma, dị elu, nnukwu oke ọkpụrụkpụ, na akpụkpọ enyi enyi. .
Ngwaahịa ahụ nwere ike izute mkpa 2 dị iche iche: matte na-enwu gbaa.Ọdịdị ngwaahịa a sitere na 5μm～200 .Om.Of N'ezie, ngwaahịa nwere ike na-emepụta dị ka ndị ahịa chọrọ nke mmanụ absorption uru ma ọ bụ na agba pụrụ iche arịrịọ .Na n'oge, ịchọ mma ọkwa muscovite tumadi-eji na ntọala, anya onyinyo, blusher, na talcum ntụ, wdg
Kedu ihe ntụ ntụ Mica nwere na arụ ọrụ ịchọ mma?
Mica bụ ihe okike sitere n'okike nwere ezigbo kemịkal kemịkalụ ma ọ bụ ihe na - adịghị arụ ọrụ ọ bụla, yabụ ọ dị mma, anaghị egbu egbu, adịghị emerụ ahụ ma dabara adaba maka ihe ịchọ mma. Mica bụ otu n’ime ihe mejupụtara granite, nrụgide kemịkal ya yiri nke granite.
Mica wafer nwere ike ichebe ultraviolet na infrared ụzarị, ya mere, ọ bụ ezigbo ihe mgbochi ultraviolet maka ihe ịchọ mma. N'ihi na ọ bụ ihe okike dị ọcha, nke na-adịghị egbu egbu na nke na-adịghị emerụ ahụ, ọ nwere uru ndị ọrụ sịntetik na-egbochi ultraviolet enweghị. Ebe ọ bụ na fere fere fere fere fere fere nke ukwuu ma ike ikpuchi ya dịkwa ike nke ukwuu, ọ bụ naanị obere ngwaahịa ndị a ka achọrọ iji mepụta akwa a na - adịghị ahụ anya nke na - egbochi ọgwụ ultraviolet na ihe na - acha ọkụ n’elu anụ ahụ.
N'ihi na mica wafer dị mma na mkpuchi na akpụkpọ ahụ na-akwụsị, ọ naghị emetụta ume nke akpụkpọ ahụ ma mee ka anụ ahụ nwee ahụ iru ala.
Mmiri enweghị ike ịbanye n'ime mica wafer, nke nwere ike igbochi evaporation nke akpụkpọ ahụ mgbe ejiri ya na ngwaahịa moisturizing.
Ike imepụta: 1500tons / ọnwa
Mbukota: 500KG / 25KG / 20KG, (eyi ma ọ bụ Pee akpa)
Ofzọ nke ationgbọ njem: akpa ma ọ bụ nnukwu
Nke gara aga: Sịntetik mica ntụ ntụ
Osote: calcined mica ntụ ntụ
Akọrọ Ala Muscovite Mica
Muscovite Ma Phlogopite Mica